Tatoazy amin'ny vozona | Ny fanaovana tatoazy
Maria Jose Roldan | | tombokavatsa
Ny tatoazy amin'ny nape dia toa manintona sy manintona indrindra eo amin'ny lahy sy ny vavy. Izy ireo dia fomba iray anaovana tatoazy tsara tarehy sy kanto nefa tsy mila mahita azy mandrakariva. Raha te-hanao tatoazy ao an-damosin'ny vozonao ianao dia tokony ho fantatrao fa rehefa manao azy ao ambadiky ny vatanao dia mila fitaratra ianao vao afaka misaintsaina azy. Hanadino anao izany fa isan'andro no anaovanao azy, ka tsy ho leo amin'ny fanaovana azy ianao.
Betsaka ny endrika amam-bika ataon'ny tatoazy azonao zahana amin'ny tendanao, saingy tsy maintsy misafidy tatoazy ianao ary endrika izay milaza zavatra momba anao sy izay mazava ho azy, maneho izany ianao, mariho ny toetranao ary ny tsara indrindra ... tsara toa anao izany.
Tsy maninona na manana volo lava na fohy ianao satria manao tombokavatsa amin'ny nape dia ho tsara foana izy ireo. Na dia manana volo fohy aza ianao dia ho hitanao foana, fa raha lava volo ianao dia hasehonao azy io rehefa tianao hatao na rehefa avelan'ny taovolo ianao.
Ao ambadiky ny vozona, izany hoe amin'ny nape, ity faritra ity dia tena nanjary lamaody hahazoana tatoazy, ary toerana miavaka izy io. Misy ny tombokavatsa izay manomboka eo amin'ny tendan'ny vozona ary manohy midina (mankany aoriana), ny hafa kosa manomboka amin'ny nape ary mankamin'ny hatoka ary ny hafa izay manomboka sy miafara amin'ity faritra ity.
Noheveriko foana fa amin'ity faritra hatoka ity dia tsy maintsy mandratra be izy, saingy toy ny zava-drehetra, misy ny olona mandratra be kokoa ary ny hafa kosa milaza fa tsy mankarary firy. Angamba noho ny fahitana mangatsiatsiaka fotsiny dia mendrika ny handalo ny fanaintainana.
Manoro hevitra anao aho raha te-hanao tatoazy eo am-pinona ianao eritrereto tsara izay tianao hatao tatoazyRaha kely nefa kanto dia azo antoka fa fanapahan-kevitra tsara izany. Raha tsy fantatrao izay hatao fa mazava fa te hanana an'ity faritra amin'ny vatanao ity ianao dia aza hadino ny galeraky ny sary izay atolotra anao eto ambany hahitako aingam-panahy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ny fanaovana tatoazy » tombokavatsa » Tatoazy nape
Tatoazy satro-boninahitra isan-karazany, mitovy hevitra amin'ny hery sy fahefana
Tattoos of goaika, mpiaro ary mpitari-dalana ara-panahy